Hey’adda SIM TRAINING AND CONSULTANCY oo tababar u qabatay 133 qofood (Sawirro) – Radio Muqdisho
Tababar aqoon kororsi ah oo ay ka qeybgaleen 133 qofood lagu baranayay xirfadaha xiriirka (communication skills) ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Tababarkan oo ay soo qaban qaabisay hey’adda SIM TRAINING AND CONSULTANCY ayaa socday muddo hal todobaad ah, iyadoo ay casharro ka bixinayeen Qubaro aqoon durugsan u leh (communication skills).
Dadka loo qabtay tababarkan oo gaarayay 133 qofood ayaa laga soo kala xulay qeybgaha bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha hey’adda tababarka bixisay Cali Ibraahim Maleykow oo xafladdii gunaanadka tababarkaasi ka hadlay ayaa kula dar daarmay xubnihii ka qeybgalay tababarka in aqoonta ay ka dhaxleen tababarka ay uga faa’iideeyaan bulshada inteeda kale.
Wuxuu sheegay in hey’adda SIM TRAINING AND CONSULTANCY ay sii wadi doonto tababarrada noocan oo kale ah si sare loogu qaado aqoonta iyo wacyiga bulshada Soomaaliyeed.
Sidoo kale madaxa xiriirka caalamiga ah ee hey’ada SIM Dr. Maxamed Ibraahim Qeyre ayaa ku guubiyay ardayda loo soo xiray tababarka iney ku dadaalaan sidii ay usii kordhin lahaayeen aqoontooda.
Hey’adda SIM TRAINING AND CONSULTANCY oo ka shaqeeysa tababarada iyo la talinta, ayaa shahaadooyin gudoonsiisay xubnihii ka qeybgalay tababarkan.
Waxqabadka Dowladda ee Toddobaadkii la soo dhaafay 27 December 2014‏